Ahoana ny fomba hananganana Root Android amin'ny Root Master tsy misy PC | Androidsis
Eder Ferreño | | Android Root, Android cheat, Tutorials
Na dia manome antsika fahalalahana ampy hanaovana ny zava-drehetra aza ny rafi-piasa Android, dia afaka mahita ferana ihany isika. Azo esorina ireo fetra ireo raha mahazo fidirana super-mpampiasa na, araka ny fantatra amin'ny Android, Root. Fa, Ahoana ny famongorana Android?
Maro amin'ireo fitaovana manolotra anay ny mety hakanana ny fitaovana Android ho an'ny PC, saingy misy ihany koa ireo rindranasa ahafahantsika mahazo miditra Root avy amin'ny finday avo lenta na takelaka.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanazava ny ampahan'ny zavatra mifandraika amin'ny maha-Root sy Fototra Android. Hanazava kely etsy ambony ny momba ny atao hoe Root isika ary hiresaka momba ny rindranasa amin'ny Root fitaovantsika, na momba ny fitaovana manery antsika hampiasa ny PC, toy ny Root Master, sy ny hafa izay mamela antsika hanao ilay asa tsy misy izany.
1 Inona no fampiasana ny fampiasana root amin'ny Android?
2 Fampiharana tsara indrindra hongotantsika amin'ny Android
3 Ahoana ny fomba hananganana Android amin'ny Root Master
4 Ahoana no hahafantarana raha faka aho na tsia
5 Ahoana raha tsy faka aho
6 Mampidi-doza ve ny manongotra ny finday?
7 Voasaron'ny faka ve ny fiantohana?
8 Inona no ataoko raha tsy afaka manavao ny root android intsony aho?
9 Torohevitra hotadidina ao an-tsaina alohan'ny hiorenan'ny faka
10 Ahoana no fanesorako ny faka
Inona no fampiasana ny fampiasana root amin'ny Android?
Araka ny efa noresahiko teo aloha, na dia manana fahalalahana hanao zavatra saika amin'ny Android aza isika, dia manana fetra foana. Amin'ny maha rafitra fiasa miorina amin'ny Linux anao, raha te hanatanteraka hetsika sasantsasany dia mila manana isika alalana manokana. Ohatra, ny fampiharana Cerberus izay mifehy ny fitaovantsika lavitra raha sendra misy halatra, tsy afaka miasa izy ireo raha tsy miorim-paka ilay fitaovana. Toy ny amin'ny raharaha Cerberus, raha te hahay hampiasa ny asa rehetra mety hitranga isika, na mampidi-doza toy inona aza, amin'ny fitaovana Android dia mila hongotantsika izany.
Afaka ny ho faka ihany koa:
Esory ny marika fanaingoana amin'ny marika.
Esory ireo rindrambaiko efa napetraka mialoha (bloatware).
Hatsarao ny hafainganan'ny rafitra.
Hatsarao ny fizakan-tena.
Ampiasao manokana ilay fitaovana.
Manaova hetsika Wi-Fi izay tsy misy raha tsy misy Root (toy ny fanarenana tenimiafina).
Manaova famerenam-bola misimisy kokoa (mampiasa fitaovana toy ny Titanium Backup).
Fampiharana tsara indrindra hongotantsika amin'ny Android
Misy am-polony fampiharana izay hamela antsika hanongotra ny fitaovana Android, fa hasongadiko ity manaraka ity.
VRoot. Iray amin'ireo malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra ny VRoot. Toy ny hafa amin'ireo rindranasa tsara indrindra hananganana Root ny fitaovantsika Android, dia tsotra be ny fampiasana azy, saingy ho an'ny PC ihany no misy azy. Ho fanampin'izany, izy io koa dia miasa mba hamerenana ny lalana hiverina ary mety saika amin'ny Android rehetra (manomboka amin'ny 2.2 ka hatramin'ny kinova farany indrindra).
Kingo ROOT. Ity dia fampiharana mahomby toy ny teo aloha ihany, saingy VRoot dia voalaza fa manana taham-pahombiazana avo kokoa. Izy io koa dia ampiasaina hanamboarana ny lalana miverina (fantatra amin'ny anarana hoe unroot) ary miasa amin'ny ankamaroan'ny telefaona Android sy takelaka.
FramaRoot. Amin'ny maha-rindranasa izay tsy mitaky solosaina dia tsy mandeha amin'ny fitaovana na marika marobe toy ny fitaovana teo aloha izy io, fa safidy koa tokony hodinihina. Ao amin'ny ITY FIAINANA ity Manana lahatsoratra iray ianao izay manazava ny fomba hanongorana fitaovana Android amin'ny Framaroot.
KingRoot. Fampiharana iray hafa ahafahantsika mamaka ny fitaovantsika Android nefa tsy mila miankina amin'ny PC. Ao amin'ny tranonkalany dia milaza izy ireo fa miasa amin'ny fitaovana 103.790 isan-karazany. Ho anisan'ny iray amin'izy ireo ve ny anao?
Azo antoka fa amin'ny iray amin'ireo fampiharana ireo dia hianaranao ny mamaka ny findainao Android na ny takelaka. Raha tianao faka SamsungIreo fampiharana ireo dia mifanaraka amin'ny finday sy ny takelaka an'ny orinasa Koreana ihany koa.
Ahoana ny fomba hananganana Android amin'ny Root Master
Alohan'ny handehananao manazava Ahoana ny fomba hanongorana Android miaraka amin'i Root Master, mamporisika anao aho hamaky ity lahatsoratra ity Fisalasalana misy Android; Mamaka sa tsy hamaka? Izay no fanontaniana izay navoakan'ny mpiara-miasa amiko Francisco tamin'ny androny. Toa zava-dehibe amiko ny mampitandrina fa amin'ny Rooting fitaovana Android, marika iray dia afaka mandà ny fanamboarana azy raha te hampiasa ny fiantohana azy isika, na dia tsy ny mahazatra aza. Etsy ankilany, amin'ny fomba ahafahantsika miditra amin'ireo cache rehetra amin'ny fitaovantsika, dia manokatra varavarana ho an'ny rindrambaiko manimba ataovy ny zavatrao, raha toa ka tantananay izany ary manome alalana anao hanao izany (zavatra hataonay tsy fantatra izany).
Raha efa namaky ilay lahatsoratra voalaza etsy ambony ianao ary mazava aminao ny momba azy, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fampiasana Root Master dia mila manana fitaovana iray izay anisan'ireo Android kinova 1.5 sy 5.x. Aza adino ihany koa fa ity fomba ity dia atolotra ho an'ireo fantsona izay tsy manana fitaovana manokana hongotana, toy ny Framaroot u Odin, ny faharoa ho an'i Samsung. Raha mahafeno ny fepetra takiana ianao dia izao no dingana manaraka:
Nosintominay ny Root Master .apk avy amin'ny ITY FIAINANA ity.
Raha tsy mahazo alalana hametraka rindranasa avy amina loharanom-baovao tsy fantatra izahay dia ampiasainay.
Mametraka ny Root Master .apk izahay.
Izahay no mitantana ny fampiharana. Hizaha efijery toy ny voalohany amin'ireo sary nalaina. Eto isika dia tsy mila manao na inona na inona, miandry fotsiny ny hanamarina ny mifanentana amin'ireo fitaovantsika.
Raha mifanaraka amin'ny Root Master ny fitaovantsika, dia hahita efijery hafa toa ilay ao amin'ny pikantsary izay hahitantsika bokotra telo isika. Tokony hikasika ny bokotra milaza hoe «Root» isika.
Miandry ny fampiharana handinika ny fitaovana izahay ary hiseho ny efijery hafa izay hahitanay ny teny hoe "Root".
Nilalao tao amin'ny "Root" izahay.
Rehefa vita ny fizotrany dia ny mikasika ny bokotra volomparasy sisa no sisa tavela, ary hongorantsika ny fitaovantsika.
Saingy misy zavatra iray hafa tsy hita: rehefa vitantsika ny Rooting Master miaraka amin'ny Root Master dia hahita fampiharana vaovao mitondra ny anarana SuperSu isika. Ny zavatra ratsy dia mety amin'ny teny sinoa ity fampiharana ity. Raha misy ny olana dia mendrika ny mankany amin'ny Google Play sy misintona SuperSu na Superusuario amin'ny teny Espaniôla.
Safidy hafa mitovy amin'izany izay mamela antsika Tsy maintsy miorim-paka Android tsy miankina amin'ny PC dia iRoot. Izy io dia fampiharana maoderina kokoa noho ny Root Master ary manana lesona manazava ny fomba fampiasana azy amin'ny lahatsoratray ianao iRoot, Mametaka terminal Android marobe nefa tsy mila PC. Ho fanampin'izay, araka ny nohazavaina tamin'io lahatsoratra io, amin'ny fikarohana ao amin'ny Androidsis ny karazana "ahoana no hamongorana ny [fitaovana]", raha tsy misy ny teny nalaina ary manolo ny "[fitaovana]" amin'ny fitaovana tadiavinay hongotantsika, dia hahita vaovao ianao hanongotra saika ny fitaovana Android rehetra. Azonao atao koa ny manindry ITY FIAINANA ity ary mandehana mijery ireo lahatsoratra samihafa izay efa nataontsika tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Fantatrao angaha ny fomba hanonganana android miaraka amin'ity sa fomba hafa? Aza misalasala mamela ny zavatra niainanao tamin'ny fanehoan-kevitra.
Ahoana no hahafantarana raha faka aho na tsia
Mety hanana fisalasalana ianao raha namaka ny findainao Android na tsia. Zavatra mety hitranga raha nividy olona tamin'ny telefaona ianao. Ka raha te hahalala ianao dia misy fomba tsotra be hahalala. Ny fomba tsara hanamarinana dia amin'ny fampiasana fampiharana. Ity fampiharana ity dia antsoina hoe Root Checker.
Ity fampiharana ity, izay azonao sintonina ity rohy, io no safidy tsara indrindra hijerena raha faka na tsia. Ny sisa ataonao dia ny mametraka ny app amin'ny findainao Android. Ao anatiny no ahitanao bokotra iray ahafahanao mamakafaka ny fitaovanao. Noho izany, holazainy aminao raha faka na tsia ianao. Tsotra izany fantarina izany, ary mila fotoana kely izany.
Ahoana raha tsy faka aho
Raha tsy mpampiasa faka isika dia mihevitra fa tsy manana fahazoan-dàlana ho an'ny superuser isika. Ireo mpampiasa izay miorim-paka amin'ny Android dia manana fidirana amin'ny lahatahiry root izay ametrahana ny rafitra fandidiana. Izany dia ahafahantsika manodinkodina ireo rakitra voalaza ireo araka ny sitrapony. Betsaka ny fanovana azo atao amin'io lafiny io.
Noho izany, raha tsy faka ianao, dia tsy hanana izany mety hitranga. Ho afaka mampiasa ara-dalàna ny findainao Android fotsiny ianao, nefa tsy mahazo miditra amin'ireo rakitra ireo izay mamela anao hanova ny lafiny sasany amin'ny findainao Android.
Mampidi-doza ve ny manongotra ny finday?
Ny fakany ny findainao dia zavatra iray izay afaka manome tombony sy fiasa fanampiny anao. Na dia misy andian-doza aza tsy azo odian-tsy hita. Voalohany indrindra, raha mametraka rindranasa amin'ny telefaona ianao dia misy fangatahana alalana hangataka anao hahafahanao mametraka azy amin'ny fitaovana.
Raha mpampiasa root ianao dia manome fidirana fampiharana amin'ny rakitra fisie rehetra. Mihevitra izany fa tsy manana fetra hetsika ny fampiharana ary manana ny fidirana amin'ny zava-drehetra izy ireo. Zavatra mety hampidi-doza tokoa, indrindra raha manana rindrambaiko maloto napetraka ianao. Satria afaka manao izay tianao rehetra amin'ny fitaovantsika ianao.
Amin'ny lafiny iray, sarotra ny dingan'ny fiorenan'ny Android. Izany no antony tsy nanolorana ireo mpampiasa manana traikefa kely hanao izany. Satria mora ny manao fahadisoana, izay mety hisy vokany mahafaty amin'ny fitaovantsika. Raha vantany vao miorim-paka ianao dia mila mitandrina tsara amin'izay apetrakao, ny fahazoan-dàlana na ireo rakitra izay tanterahinao.
Noho izany, esory ny telefaona Android zavatra tsy maintsy eritreretina tsara izany alohan'ny hanaovana. Satria raha manenina amin'ny fotoana rehetra ianao, na dia azo atao aza ny mamadika ny fizotrany, dia tsy mora ny manatratra azy.
Voasaron'ny faka ve ny fiantohana?
Mety efa naheno momba an'ity lohahevitra ity ianao indraindray. Ity dia iray amin'ireo olana sarotra indrindra raha ny fotony no jerena. Araka ny mety ho very ny fiantohana amin'ny findainao Android, fa tsy azo antoka 100%. Noho izany, miteraka fisalasalana marobe amin'ny mpanjifa izany.
Marina izany amin'ny ampahany, fa raha fantatrao ny torolàlana avy amin'ny Vondrona eropeana, azo atao izany fa hijanona tsy sakana izany. Raha mponina ao amin'ny firenena eropeanina ianao ary nividy telefaona tany amin'ny iray amin'ireo firenena, somary sarotra ny raharaha. Inona koa, matetika dia miankina amin'ny mpanamboatra tsirairay.
Na dia ny fironana aza tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ireo mpanamboatra nanjary tsy nilefitra loatra tamin'io lafiny io. Ohatra, raha sendra manana olana amin'ny telefaona Samsung ianao, ny zavatra voalohany jeren'izy ireo dia ny hoe miorim-paka ianao na tsia. Raha izany dia tsy hatao antoka ny fanamboarana. Zavatra mety ho lafo be amin'ny mpampiasa. Saingy, ny mpanamboatra rehetra dia ho afaka mamantatra mora foana raha faka faka ianao.
Saingy, araka ny efa nolazainay, miankina amin'ny mpanamboatra azy io. Na dia tena atahorana aza, dia rehefa hamaka ianao dia ho very antoka. Amin'izao fotoana izao tsy misy politika mazava amin'ity lafiny ity. Raha misy fisalasalana dia azonao atao ny mijery hatrany ny tranonkalan'ny mpanamboatra, izay matetika misy fampahalalana momba izany.
Azonao atao ihany koa manafina faka Raha sanatria ka misy rindrambaiko manome anao olana amin'ny maha mpampiasa anao super.
Inona no ataoko raha tsy afaka manavao ny root android intsony aho?
Ny iray amin'ireo olana lehibe mety hatrehintsika rehefa mamaka. Rehefa manao izany amin'ny telefaona ianao dia manjavona matetika ireo fanamarihana fanavaozana. Na dia miankina betsaka amin'ny mpanamboatra azy aza izany. Noho izany, ny fanavaozana ny OTA, izay raisintsika amin'ny telefaona mahazatra, dia tsy mandray intsony isika.
izany manery antsika tsy maintsy mitady vaovao farany samirery. Manana pejy ahafahanao misintona an'ity fanavaozana ity amin'ny tanana, amin'ny endrika APK, ohatra. Saingy, mety hiteraka loza maro izany. Voalohany indrindra, tsy fantatsika raha fanavaozana azo antoka toy ny Android izany. Ary koa, amin'ny fametrahana azy io dia azo inoana fa hanala ireo izay miorim-paka amin'ny telefaona.
Noho izany, raha vao nametraka fanavaozana ianao dia azo inoana fa tsy maintsy hamaka intsony. Ka tsy maintsy mandalo amin'ilay dingana indray ianao. Ka amin'ity lafiny ity dia misy drawbacks vitsivitsy izay manahirana ny fahazoana na fametrahana fanavaozana.
Torohevitra hotadidina ao an-tsaina alohan'ny hiorenan'ny faka
Raha nanapa-kevitra ny hamongotra ny telefaona Android ianao, dia misy lafin-javatra maromaro izay tsy maintsy raisinao alohan'ny hanombohanao ny fizotrany. Amin'izany fomba izany, raha hanomboka ny fizotranao ianao dia tsy hanana olana mandritra izany.
Alohan'ny hanombohana, tokony ho azonao antoka fa manana bateria 60% farafaharatsiny ao anaty telefaona ianao. Izy io dia dingana iray izay mety maharitra sy mandany. Noho izany, tsy tokony hataonao amin'ny bateria ambany velively. Satria mety hiteraka olana izany na mety tsy ho vitanao ny mamita azy.
Raha hiorim-paka amin'ny solosaina ianao, tsara kokoa ny mampiasa laptop. Satria amin'izany fomba izany dia tsy miankina amin'ny ankehitriny ianao. Raha sanatria maty ny solosaina, satria maty ny herinaratra dia mety hiteraka fahavoazana tsy azo sitranina amin'ny telefaona ianao. Noho izany, azo antoka kokoa ny solosaina finday amin'ity tranga ity.
Rehefa miorim-paka ianao dia tsy ho voafafa ireo angona voatahiry ao anaty telefaona. Na ireo izay ao anaty fitadidianao anatiny na ireo ao amin'ny SD. Raha te-hanao kopia ianao dia tsara izany, ho an'ny filaminana, saingy tsy hofafana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana.
Ahoana no fanesorako ny faka
Raha efa mpampiasa root amin'ny finday Android ianao, saingy tsy mahita tombony ary te hamadika azy io dia afaka manao izany izahay. Amin'io lafiny io dia misy safidy maromaro, izay miankina amin'ny ampahany amin'ny ROM izay nampiasanao rehefa namaka ny telefaoninao.
Misy ROM vitsivitsy izay mamela anao hongotana mivantana. Manana endri-javatra izay manampy anao mamadika ny fanovana izy ireo ary mamerina ny finday amin'ny toetrany voalohany. Izy io dia fiasa antsoina hoe Unroot. Saingy tsy zavatra anananay amin'ny ROM rehetra fanao any ivelany any.
Ho fanampin'izany, afaka mampiasa fampiharana hafa isika. Ny mpikaroka rakitra toa ny ES Explorer dia manampy antsika hanafoana ireo folder root, ka rehefa vita izany, rehefa mamerina ny telefaona dia miverina amin'ny toetrany voalohany ny telefaona. Misy ihany koa fampiharana hafa ao amin'ny Play Store, izay ahafahanao mamadika ny fakan'ny telefaona rehetra. Azonao atao ny misintona azy eto.
Raha tsy manome anao an'ity mety ity ilay napetrakao, azonao esorina amin'ny tanana izany. Ny tokony hataonao dia ny mametraka indray ny firmware voalohany. Ny mpanamboatra sasany dia manome fitaovana ho an'ny mpampiasa hametraka indray ny firmware izay nananany, mba hialana tanteraka ilay faka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Ahoana ny fomba hanongorana Android
183 hevitra, avelao ny anao
mamafa ny fampahalalana amin'ny telefaona? ho an'ny nexus 5 nataoko hoe isaky ny tsy maintsy ahodinao io dia mila mamolavola azy ... ary tsy tiako izany
lahatsoratra tsara Afaka namaka tsara ny optimus pro lite aho tao anatin'ny 2 minitra. Misaotra betsaka.
dionelline dia hoy izy:
Inona ny rindranasa nampiasanao?
Mamaly an'i dionelina
Ny nanovako andrid ho Espaniôla ao amin'ny galaxi s4 hatramin'ny nanovako farany ary tamin'ny anglisy daholo ny zava-drehetra
Manatevin-daharana ny fanontaniana aho, misy ifandraisany amin'ny endrika ve ny miorim-paka miaraka amin'ity fomba ity?
Mamaly an'i george
Ity fomba ity dia tsy mamolavola na manafoana data.
kevin vargas dia hoy izy:
Salama namana, manana galaxy s2 t989 aho, ka hoy izy ireo ny hercules amin'ny telefaona finday… mieritreritra ianao fa afaka mampiasa an'io fampiharana io ianao hanovana ny kinovako androit. Miandry ny valinteninao aho
Mamaly an'i kevin vargas
gissel dia hoy izy:
Salama Francisco, azonao atao ve ny manampy ahy mividy Samsung Galaxy Ace 4 ary hita fa nangalatra izy io, ilay olona namidy tamiko (sakaiza taloha) dia tsy mandray an-tanana, ahoana no fomba hanovako ny imie ary ho toy izany mahay mampiasa azy?
Mamaly an'i gissel
cfgorka dia hoy izy:
Vao nanao an'io aho ary tsy misy format ilaina.
Mamaly an'i CFgorka
arrhenius dia hoy izy:
mifanaraka amin'ny nexus 4 ve izy io? Very ve ny fiantohana raha vita?
Mamaly an'i arrhenius
Manana xperia s aho, inona no fotony? Mahasoa ve ny hafainganana sy ny faharetan'ny bateria?
Asterisk dia hoy izy:
Ny fananana bokotra mena sy volomparasy na volomparasy, dia te hanoratra «bokotra volomparasy» ianao, raha ny volomparasy dia mety hidika «Ny mena mena miakatra izay misarika voahitsakitsaka»
Valiny amin'ny Asterisk
cofla2004 dia hoy izy:
amin'ny XT890 na Razr I, bokotra volomparasy iray ihany no mivoaka amin'ny farany. Ary tsy mamaka izany
Valiny amin'ny cofla2004
Giora tsy ampy taona dia hoy izy:
Deluxe, miasa tsara amin'ny takelaka Samsung Tab 3.
Mamaly an'i Giora Minor
Salama Giovanni, manana ny ST-210 amin'ny Android 4.1.2 ve ianao? Izaho dia Andres avy any Arzantina. Misaotra!
Adama dia hoy izy:
Wow niasa tsara izany misaotra betsaka. Miarahaba namana.
Adrian Grace dia hoy izy:
Miaraka amin'ny nexus 7 2012 dia tsy mandeha io 🙁
Valiny tamin'i Adrián Gracia
Ahoana no ahazoako ny rindranasa fitantanana faka sinoa?
Ampidiro ny Play Store ary apetraho ny SuperSu
Toy izany koa no nitranga tamiko, rehefa avy nihodina aho, nametraka ny supersu tamin'ny fiteniko aho, nosokafako, nohavaozina ny binariera ary napetraka aho, rehefa vitako ny zava-drehetra nandehanako teo amin'ny menio Android, ny toerana, ny application, jereo daholo, tadiavo ny Fakan'ny sinoa ary esory izany. Nanomboka teo dia nanomboka nitantana ny faka ny supersu. Tsy nahita safidy hafa aho
Nety tsara tamiko ny s3 mini-ko nefa inona no hataoko amin'izany?
Ary iza no fampiharana mety hamindra ny fampiharana amin'ny sela satria niezaka tamin'ny iray aho fa tsy mandeha ..
Nanao ny fametrahana master root aho ary aorian'ny namelako azy dia nisintona fampiharana antsoina hoe Font aho mba hanovana ny taratasin'ny interface, ny zava-nitranga dia ny lg g2 no namerina ny tenany ary rehefa nanomboka nanome pikantsary misy hafatra izy: tongasoa manadio: miverimberina ary efa toy izany nandritra ny antsasak'adiny. Novonoiko ilay izy ary niverina foana aho ary mipoitra hatrany ilay hafatra mitovy.
Lazaiko aminao fa manahy aho fa ny fanontaniako dia: Manimba ny rafitra fiasanao? very antoka? Ahoana no hamelomako azy io indray? AMPIO AHO AZAFADY.
Mikaroha androidsis raha te-hamafa ny firmware am-boalohany amin'ny mode offline ianao dia hovelominao indray.
yomar dia hoy izy:
Nataoko tao amin'ny galaxy samsung mega-ko izany fa heveriko fa manongotra azy aho ary mivoaka ilay mpampiasa super sinoa saingy nisintona root checker aho ary milaza amiko fa tsy faka aho. Ny hany fomba nanesorako ny faka sinoa dia ny fisintomana ny rom ofisialiko ary flashing nataon'i odin amin'ny teny hafa dia tsy niasa ho an'ny maodeliko samsung galaxy mega 6.3 att
Mamaly an'i yomar
Azo esorina amin'ny rindrambaiko mitovy ve izany?
Nexus 5. Android 4.4.2. Tsy mandeha izany
Luri olete dia hoy izy:
Toy izany koa, Nexus 5. Android 4.4.2. Tsy mandeha izany
Valiny tamin'i Luri Olete
Adolfo Quevedo dia hoy izy:
Raha niasa ho ahy tamin'ny lg g2 d805 avy tany Claro Colombia aho ary efa namafa ireo rindrambaiko efa voaloha izay tsy misy afa-tsy toerana fotsiny. Misaotra Francisco noho ity lesona ity dia efa nanandrana tamin'ny fomba hafa aho nefa tsy nahomby
Mamaly an'i Adolfo Quevedo
Dahaka Dunkelheit dia hoy izy:
Izy io dia niasa tamina takelaka noblex t7014 fanamboarana Arzantina izay tsy iza fa ny takelaka sinoa hisense sero 7 lite miova endrika ... Tsotra ny fiorenan'ny faka, ary tsy ilaina ny mamerina ilay takelaka ... Ireo izay nilaza fa nampidina ny root checker ary notifiriko izy ireo fa tsia. faka izy ireo, tsy maintsy niditra an-tsokosoko izy ireo noho ny mpitantana faka sinoa, azo antoka rehefa nanontany aho raha te hamela ny fidirana amin'ny root amin'ny mpanamarina faka izy ireo satria tsy azony ny sinoa nilalao na inona na inona ary nanakana ny fampiharana hiditra chke root, torolàlana ny loko rehefa miditra ny fampiharana fitantanana sinoa, raha mena ny tarehintsoratra sinoa dia tsy manana fahazoan-dàlana ny fampiharana, koa mamporisika anao aho ny misintona Supersu raha vantany vao miorim-paka izy ireo. mitandrema, hampitandrina anao ihany koa ny fampiharana sinoa fa te hanana fidirana ifotony i Supersu, jereo tsara ny toerana hikasika azy hanomezana alalana azy, avy eo ajanony ny fisoratana anarana sinoa avy amin'ny fikirakirana fampiharana ary sakano amin'ny alàlan'ny supersu ny fahazoan-dàlana raha tsy izany dia hanana ny zava-drehetra ianao .., sy ny fitiavan'ny di Aza misintona endritsoratra, tokony ho azonao antoka fa manohana azy ireo ny ROM raha toa ka tsy hitranga aminao ny zavatra mitovy amin'ny mpampiasa lg ... Misaotra ny fomba tokana nety tamiko
Valiny tamin'i Dahaka Dunkelheit
ok manaraka ny dian'ny francisco sy ny council anao dia hataoko amin'ny takelaka izany satria manana an'io ihany aho, tiako ho fantatra fotsiny raha ny fiovana izay nankasitraka anao, raha afaka misintona fampiharana bebe kokoa ianao, azonao atao ve ny mamindra izany amin'ny karatra? Misaotra betsaka!!
Mamaly an'i gise
rehetra dia hoy izy:
Mamaly an'i allan
she Wolf dia hoy izy:
Ao amin'ny Motorola, moto g amin'ny farany vao mivoaka ny bokotra volomparasy. Ary tsy mamaka izany
Tsy mety amiko izany amin'ny xperia z mahazo bokotra volomparasy aho ??????
Niasa tanteraka tamiko io a: i-joi (i-Call 350); rehefa apetrakao ny Super Su hanavao ny binaries dia manome ahy = herror. Etsy ankilany… rehefa mametraka Root Checker Basic… .SI dia milaza amiko fa amin'ny «Arahabaina Ity fitaovana ity dia manana root acces» ¿¿¿¿¿
endy dia hoy izy:
Ao amin'ny NoTE II dia tsy mandeha izy io fa milaza fa lesoka amin'ny fiarovana vaovao an'i Saumsung ary misy bokotra volomparasy hita izay mahalala izay lazainy hehehe
Mamaly an'i endy
Rehefa avy nanandrana fomba maro dia niasa tsara ny iray tamin'ny tsaramaso jelly Lg 7 nohavaozina, misaotra Francisco.
Mamaly an'i lilia
viruschip dia hoy izy:
Manana asus memo pad fhd 10,1 miaraka amin'ny adroid 4.3 aho ary tsy manao na inona na inona mihitsy na faka na manao ireo dingana fa tsy miorim-paka
Valiny amin'ny viruschip
Ramses Garcia dia hoy izy:
Niasa ho ahy izany, mora haingana sy tsotra !! Matetika aho tsy manome hevitra! Tazoniko ny tsara na ny ratsy! Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia te-hizara aho fa raha miasa amin'ny LG pro Lite-ko sy ho an'ireo izay maneho hevitra hoe inona ny lokon'ny volomparasy, ho ahy dia ilay teo ankavanako no mena ary ilay teo ankavanako dia volomparasy = volomparasy !! hahaha fehin-kevitra inona ary mirary soa!
Valiny tamin'i Ramsés García
Alexander De La Asuncion dia hoy izy:
Vao namaka fakany galaxy GT-P3113 aho ary nivadika ho tsara, tsy handrafitra na hamafa na inona na inona aho. Misaotra !!!!!
Valiny tamin'i Alexander De La Asuncion
Tsy nety tamiko ilay s4 mini-ko
Ampidiriko io, ataoko tsara ny dingana rehetra fa ny loko roa volomparasy sy mena dia tsy miseho. Volomparasy ihany fa tsy misy fandrosoana intsony. Misy olona manampy ahy?
Amin'ny safidy farany dia bokotra volomparasy lehibe ihany no ahazoako azy fa tsy ny mena sy volomparasy izay miseho amin'ny fisamborana.
Ny findaiko dia galaxy galaxy Samsung ary tsy misy zavatra hafa tsy afaka mamaka azy aho raha afaka manampy ahy ianao dia tena tiako izany
Tena tsara amin'ny androtona fa mamafa ny ap
susi dia hoy izy:
miasa amin'ny samsung s4 mini ve izy io ??
Mamaly an'i susi
Folo izy !! Ny hany zavatra tsy haiko dia ny fomba tsy hanajanonana ny fampiharana hampiasana ny supersu. Manana android 4.1.1 aho ary tsy manome ahy ny safidy tsy hamono izany. Raha afaka manampy ahy amin'izany ianao dia tsara izany.
Ny olona iray manana i-call 350 dia mila kopian'ny fisie rehetra ao anaty folder APP mba hahitana azy io, mila mankany amin'ny fahatsiarovanao ny finday ianao ary ny lalan'ny SYSTEM / APP dia mamafa ireo rakitra marobe aho ary tsy manao izany aho tadidio hoe iza amin'ireo no hofafako ary manome lesoka be dia be aho, azafady raha misy manao ahy kopian'ny folder-nao, ny mailako pjuanjo_1@hotmail.com
Ampio apetrakao izy fa nataoko ny dingana fa amin'ny farany dia tsy mampiseho mihoatra ny bokotra volomparasy fa tsy ilay mena ary avy eo dia tsy mitranga izany ..
santiago marcos soria preiti dia hoy izy:
Tamin'ny farany dia nesoriko ny tompony ary ny super dia nihazakazaka folo. Ny root checker dia milaza amiko fa miorim-paka izy io. Sintomy ny greenifie izay mametraka ny apps amin'ny hibernation ary ankehitriny ny alcatel-ko amin'ny sampy mikasika dia mandeha tsara tokoa. Misaotra betsaka. Tsy namporisihina aho hamaka azy io. Mariho fa nampitandrina i Francisco fa tsy ny finday rehetra no miorim-paka amin'ity rafitra ity. Fiarahabana avy any Arzantina.
Mamaly an'i santiago marcos soria preiti
Mohamed dia hoy izy:
mifanaraka amin'ny sony sp ko ve izy?
Mamaly an'i mohamed
Ny serivisy dia nanompo ahy tonga lafatra, manana ny Samsung S4 aho ary ny fanontaniako dia, aorian'ny fakan-telefaona ny telefaona, azoko esorina ve ilay rindranasa?
ozuki dia hoy izy:
Namaka ny xperia L aho ary nahafinaritra ilay izy… .nefa teo amin'ny galaxy s3 mini dia nisy bokotra volomparasy fotsiny .. ..Inona ny manaraka?…
Valio i ozuki
Manana moto g nametraka azy aho, narahiko ny tohatra ary nisy bokotra volomparasy nipoitra, notsindriako izy ary hita taratra litera sinoa fa mamaky sdcard sy root .. Ary nampiasa ny checker root aho ary milaza amiko fa tsy faka aho . tahaka ahy?
Tsy azoko atao ny manavao ilay fitaovana Samsung galaxy s III mini ahoana no ahafahako mamafa ity programa ity misaotra
Carlo Coello dia hoy izy:
XPERIA Z Ultra, narahiko ireo dingana ary amin'ny farany dia bokotra volomparasy fotsiny no hitako fa tsy volomparasy sy mena, dia nojereko raha namaka izy io ary tsy mandeha. Misy mahalala fomba hafa ve?
Valiny tamin'i Carlo Coello
rehefa mpampiasa faka ianao dia tsy afaka manavao izany dia iray amin'ireo fatiantoka azonao atao ny manavao ny tanana amin'ny alàlan'ny fampidinana azy ireo sy ny fampiasana pc fotsiny
Salama miasa miaraka am-paosy galaxy miampy 4.0.4
Salama, hitako fa toa izany koa no mitranga amin'ny maro toy ny tamin'ny dingana farany, bokotra volomparasy tokana ihany no miseho fa rehefa voahidy tsy manao na inona na inona ... ... ary tsy mandeha ny faka ... misy vahaolana ve? Manana laza galaxy aho. Misaotra betsaka.
Ahoana ny fomba famongorana mini galaxy s4 amin'ny android 4.2
Misaotra betsaka fa niasa lavorary ho ahy tamin'ny alcatel one touch m, pop (520),
Efa nanandrana tamin'ny fomba hafa aho ary tsy nety tamiko, fa ny anao kosa niasa lavorary tamiko 😀
Salama namana, tsara ity
Jun dia hoy izy:
naa amin'ny s4mini tsy omeny, amin'ny farany dia misy bokotra 2
Mamaly an'i jun
yeye dia hoy izy:
Tsy nety tamiko io tamin'ny galaxy ace-ko, tamin'ny farany dia bokotra volomparasy lava ihany no azoko
Valio i yeye
Rami dia hoy izy:
lainga daholo izany
Mamaly an'i rami
Azoko antoka ianao fa tsia, satria tamin'ny alcatel no nanaovako azy. Nojereko izy ary mampiasa fampiharana izay mila superuser aho.
hey namana, miasa ho an'ny lg l9 miaraka amin'ny android 4.0 ve izany?
Ny programa nataoko mba hanesorana sy hamindrana ireo fampiharana sd ary nangataka ahy izy mba ho mailo rehefa manao ny dingana tsikelikely dia niasa tsara izy io ary izao dia afaka manafoana ny rindranasan'ny mpandraharaha sela avy amin'ny xperia aho mijery
hey, mametraka superus hafa aho ary ilay nomen'ny fampiharana ahy dia tsy mamela ahy hampiasa azy .. inona no azoko atao?
Billy dia hoy izy:
Nataoko izay rehetra napetrakao ary tiako hojerena raha efa niorim-paka tamin'ny root root aho, fa milaza kosa hoe "Miala tsiny aho" Tsy afaka miditra amin'ny lalana mety ity fitaovana ity
Azonao atao ve ny milaza amiko ny tokony hatao?
Manana takelaka acer iconia B1-A71 aho 4.2.1
Tena tiako izany.
Valiny tamin'i Billy
Iz dia hoy izy:
Nisy nanandrana azy tamin'ny xperia m (c1904) ... Te-hahafantatra aho raha miasa amin'io maodely io
Manana izany maodely izany aho fa tsy sahy mamaka azy
Mamaly an'i Jez
fanontaniana iray hafa maninona no alaina amin'ny endrika EXE izy io?
Miasa amin'ny paosiko galaxy Samsung aho neo misaotra farany fa misaotra faka aho bro
Note tsy mandeha ho an'ny Samsung galaxy fame na x phería andramo izany miaraka amin'ireo rahalahiko fa tsy misy
Salama… Brian no anarako… Te-hangataka fanampiana aminao aho… ny olana dia nanana olana tamin'ity rindrambaiko ity aho ary rehefa nametraka azy aho dia tsy hoe tsy hamaka ny s4 fotsiny, fa rehefa nametraka azy aho ary rehefa tsapako fa tsy mandeha ilay izy dia tiako esorina ilay izy fa tsy vitako ... tiako ny manontany anao hoe maninona aho no tsy afaka manao an'io ary ahoana no fomba hanaovako azy io amin'ny findaiko ... azafady manantena afaka manampy ahy ianao ..!
Mamaly an'i brian
Salama ... Brian no anarako ... Te hangataka fanampiana aminao aho ... ny olana dia nanana olana tamin'ity fampiharana ity aho ary rehefa nametraka azy io dia tsy hoe tsy namaka ny s4 fotsiny aho fa indray mandeha nametraka azy ary rehefa tsapako fa tsy mandeha io dia tiako esorina ilay izy fa tsy vitako… tiako ny manontany anao hoe maninona aho no tsy afaka manao an'io ary ahoana no hataoko mba hamafana azy amin'ny findaiko… azafady manantena anao afaka manampy ahy ..!
Minu dia hoy izy:
Miaraka amin'ny Alcatel One touch 918-D mahazo barà volomparasy lava aho, saingy tsy misy mena ary tsy manao zavatra hafa. Omeko fa tsy misy. Mahazo taratasy vitsivitsy aho rehefa manindry azy. Tena ratsy, hanandrana fomba hafa aho
Mamaly an'i Minu
Raketo aq raha tsy android 4 ianao dia tsy mandeha amin'ny alcatel anao ity fampiharana ity.
Florentino obando dia hoy izy:
Amin'ny pejy inona no ahafahako misintona azy
Valiny tamin'i Florentino obando
>. <tsy mandeha amin'ny HTC VIVID fa mamolavola ny sela fotsiny
Nahili dia hoy izy:
TENA TSARA! MANKASITRAKA an'arivony!
Valiny tamin'i Nahilí
Tao amin'ny lg L7x ahy dia tsy mandeha izy, bokotra volomparasy ihany no nivoaka ary tsy namaka
Kapiteny Whipala dia hoy izy:
Tsy mandeha i che francisco ... nataoko daholo ny zava-drehetra ... apetraho ny programa ... manaraka ny torolàlana hatramin'ny farany ny zava-drehetra. fa ny root checker kosa milaza amiko fa tsy faka
ary ny supersu tsy miseho amiko koa. manana galaxy s3 aho.
Valiny tamin'ny kapiteny Whipala
Hikaroka Androidsis "Ahoana no hamongorana Samsung Galaxy S3" fa manana tutorial manokana ianao hahazoana Root.
iorelk dia hoy izy:
manana virust fa rakitra apk dsd ny pc m manakana ny antivirus
Download APK maimaim-poana dia hoy izy:
Misaotra corduroy, nanampy betsaka ahy tamin'ity fihodinana ity ianao.
Valiny Download APK maimaim-poana
Carlos Lopez dia hoy izy:
Manana Nova tsy haiko raha afaka mamaka
Mamaly an'i carlos lopez
Reggi dia hoy izy:
Miasa amin'ny lenovo s960t
Mamaly an'i Reggi
Juvenal Tarqui dia hoy izy:
Raha milaza ny super Su fa tsy miorim-paka izy io dia satria tsy. Misy karazany roa ny faka iray dia mpampiasa root ary ny iray hafa dia mpampiasa vao ...
Mamaly an'i Juvenal tarqui
rehefa vonoina sy eo dia lany faka
archon dia hoy izy:
Mamaly an'i archon
Mety amin'ny moto d1 ve izany?
Mamaly an'i noel
danieldgtldaniel dia hoy izy:
ny Xperia Go tsy azo atao Root efa nanandrana ny zava-drehetra aho 🙁
Mamaly an'i danieldgtldaniel
Nampiasa samsumg s3 international aho (i9300) ary tsy nitazona azy aho, bara volomparasy ihany no azoko ary tsy nisy na inona na inona nivoaka, ampiasao ny robot checke ary milaza amiko izy fa tsy miorim-paka tahaka ny ataoko.
Azonao valiana ve ireo izay mahazo ny bokotra volomparasy fotsiny amin'ny farany? MISAOTRA ANAO
Betsaka ny efa nanontany anao ary tsy mbola namaly an'iza n'iza ianao momba an'io.
Mazava ho azy fa afaka mamaly aho, tsotra toy ny hoe tsy mifanaraka amin'ireo terminal ireo ny fampiharana.
sthefy89 dia hoy izy:
Azafady azafady ho an'ny sela ary Samsung Galaxy Mega GT-I9152 ary tsy niasa ho ahy ity fampiharana ity, afaka misy olona manampy ahy hanongotra ny selako azafady ... zavatra iray hafa raha misy mahalala ny fomba hanovana azy ho 4G, azafady mba ampio aho .
Mamaly an'i sthefy89
milamina dia hoy izy:
Tsy nety tamiko io, ny sela ny ahy dia ny Android kinova 4.3 ary iray ihany ny bokotra volomparasy amin'ny teny sinoa miaraka amin'ny teny faka eo afovoany, misy fomba hafa hanaovana azy tsy misy framaroot sy tsy mampiasa pc?
Mamaly an'i leidy
miasa amin'ny M4 ve izy io?
Pablo lopez dia hoy izy:
Mario manana M4TEL ss1090 aho ary nahomby tamiko izany
Valiny tamin'i Pablo Lopez
Francisco Javier dia hoy izy:
Ary ho an'ny Samsung galaxy s telo mini
Valiny tamin'i Francisco javier
libistic dia hoy izy:
afaka mamaka gova volomboasary ve ianao?
Mamaly an'i libistico
josimar garcia dia hoy izy:
Manana marika finday aho, ahoana no hamaka azy ary manandrana programa maromaro aho nefa tsy misy na inona na inona mitranga
Mamaly an'i josimar garcia
Jorge Monsivais dia hoy izy:
Ahoana ary, tiako ho fantatra raha afaka mamaka maodera XT modely XT1058 ianao, tiako raha afaka mamaly ahy ianao, satria mbola tsy ampirisihiko hamaka azy io, satria niorim-paka hamerenana rakitra vitsivitsy izay nesoriko tsy nahy, taorian'ny ity azonao esorina?
Valiny tamin'i Jorge Monsivais
ferinxon dia hoy izy:
MY pantech Discover dia tsy te-handrehitra wifi aorian'ny famerenana amin'ny laoniny backup miaraka amin'ny Wifi password Recovery ... ahoana no hametrahako ny OS avy amin'ny faka?
Mamaly an'i ferinxon
Ahoana no hiverenako amin'ny fanjakan'ny orinasa miaraka amin'ny master root?
mickaela dia hoy izy:
Salama: ahoana no ahafahako manaisotra ny apk sinoa ary manolo azy amin'ny SuperSu? Amin'ny teny sinoa ny alàlana dia amin'ny fiteny sinoa. Ary tsy azoko hoe aiza no tokony hanisy marika. Mila valiny maika aho azafady.
Mamaly an'i mickaela
Raha vantany vao misintona ny SuperSu na SuperUser avy amin'ny Play Store ianao dia hanontany anao raha te esory ilay Sinoa.
Salama: manana mini Galaxy SIII aho ary nandeha soa aman-tsara, tsy nisy olana ny fakany saingy tsy te hamela ahy ny fampiasa rehefa SuperSU, satria tsy mamela ahy ny fampiharana sinoa amin'ny alàlan'ny default. Mila valiny maika aho azafady. Oh ... ary ho an'ireo manana ny bisikileta RARZ D1 dia hamaka izany tsy misy olana amin'ny framaroot.
Ny safidy hafa anananao dia ny miditra ny làlana / data / app na / System / app ary mitady ny apk an'ny rindranasa Root Chinese, izany hoe ny SuperUser sinoa ary hamafa izany amin'ny mpikaroka rakitra Root rehetra. Avy eo averinao indray ary apetrakao ny Superuser na SuperSu ary dia izay.
Pablo Alvarez sary placeholder dia hoy izy:
Ahoana ny momba ny namana, efijery volomparasy fotsiny no hitako ary nanamarina tamin'ny root checker aho raha faka ary hoy izy tsia, inona no ataoko? Manana IBS mini aho
Valiny tamin'i Pablo Alvarez
Hikari dia hoy izy:
Salama manana Sony L aho ary maniry ny hamaka azy io. Raha mampiasa ilay application omenao aho ... mety ve izany? Satria tsy te-hanaja ny findaiko aho. Misaotra miarahaba
Mamaly an'i Hikari
christian507 dia hoy izy:
Tsy manokatra ny rindrambaiko galaxy note 2 i317m aho ary miaraka amin'ny famroot dia mahazo gandalf fotsiny aho
Valiny amin'ny christian507
maximilian dia hoy izy:
Tsara ny tolak'andro, avelao aho hilaza aminao ny zava-nitranga tamiko niainako ity programa ity niaraka tamin'ny lg g2 niaraka tamin'ny kit kat 4.4.2, ary raha efa fantatro fa tsy mila nanandrana azy aho dia nametraka sy namaka, nanandrana programa iray nitaky root ch2 na zavatra mitovy amin'izany, Mba hanovana ny soatoavina amin'ny lalao, ary niasa izy io, rehefa namerina ny telefaona aho dia tsy mandeha intsony, napetrako indray, nilaza tamiko izy fa faka ny root root, na zavatra hafa toy izany koa ny niantsoana azy, nametraka ilay super su aho ary tsy niasa ho ahy intsony izany, esoriko ny zava-drehetra ary apetrako indray ny sinoa, miorim-paka indray aho, maika hametraka izay ilaiko aho, programa handika sy hamonjy ny wi rehetra-ko fi tenimiafina (faka ihany) ary niasa ho ahy izy io, saingy nandao fotsiny ny banga, voahitsakitsaka ny zava-drehetra eto, mangataka ahy ny programa mba hamerina ny wifi, taloha fony aho faka tamin'ny 4.2 dia tsy nanontany ahy izany fa nomeko ok, nanomboka tamin'izay fotoana izay dia tazomiko eo amin'ny bara ny wi fi, toy ny te handrehitra aho, nefa tsy mihodina mihitsy, toy ny rehefa mamono sy mamono azy, fa eo afovoan'ny arabe. Mamerina mamerina ny telefaona aho, dia mbola mitovy ihany. Tsy nanana safidy ny famerenako mafy, very ny zava-drehetra, ary ny tsy nampoizina, mbola nitovy ihany taorian'ny famerenanana mafy, tao no niahiahy ahy satria namerina in-2 aho ary tsy nisy, saika nankany amin'ny serivisy teknika aho, saingy tao amin'ny mifarana ary toy ny safidy farany nataoko tamin'ny pc Miaraka amin'ny fametahana pc ny kit kat 442 dia tsy namela ahy izany, mandra-pahitako ny safidy hanamboarana fanavaozana ratsy (nantsoina hoe zavatra mitovy izany, ny safidy tsy ataoko tadidio tsara) nataoko izany ary maharitra raha vao nanavao ny kit 442 aho dia nahavita nanao reset mafy hafa ary namboarina.
Lazaiko azy ity raha sendra misy manana olana mitovy amin'izany, ary ny fanontaniako ho an'ny jeneralin'i Francisco dia ny fiheveranao fa mety hitranga izany, mety ho ny fakany ratsy na ny programa momba ny teny miafina, ary maninona no ilay famerenana mafy tsy manamboatra ary voatery nametraka ny kk442 hanamboarana azy? Misaotra tamin'ny famakiana sy ny fiarahabana avy any Arzantina ka hatrany Francisco sy ny olon-drehetra.
Mamaly an'i maximiliano
Ahoana no ahavahako azy azafady?
Andy Moreno dia hoy izy:
Tsara. Misaotra, tsara be ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i Andy Moreno
Fantatrao ve raha miasa amin'ny Primux Zeta izany?
ny zavatra tsara indrindra dia ny manandrana azy ianao ka milaza aminay.
Antonia Belén dia hoy izy:
Mety amin'ny lg l3 -ko ve izany? 🙂
Valiny tamin'i Antonia Belén
Ahoana no fomba hamongorako samsung galaxy s4-mini gt-19190 jelly bean 4.2.2?
Kamenizer dia hoy izy:
TSY fantatro izay hitranga, andro vitsy lasa izay ny programa dia niasa ho ahy araka ny aseho amin'ny pikantsary, ary ny mpanamarina ny faka dia nanamafy fa efa faka aho, saingy hitako izao fa tsy root intsony aho, nanandrana nampiasa aho ny rindranasa indray, ary firy amin'ny maro, bokotra volomparasy lehibe fotsiny no hitako, ho fanampin'izay raha tsindrio io dia mahazo hafatra aho fa tsy afaka mifandray aminy tsy haiko hoe aiza. Tsara raha naharitra.
Mamaly an'i Kamenizer
Jorge Coral dia hoy izy:
Voasedra tamin'ny QBEX QBA769, miasa tsara. Tena sariaka.
Valiny tamin'i Jorge Coral
Rodrigo Caballero dia hoy izy:
Mahita varavarankely kely misy bokotra volomparasy tokana aho ary milaza faka tahaka ny in-4, inona no dikan'izany?
Valiny tamin'i Rodrigo Caballero
Siegfried dia hoy izy:
Notsapaina tamim-pahombiazana tamin'ny Bogo QC fa tsy nahomby ny Framaroot; Mahazo sary masina roa aho, ny iray mamaky ny Root, ity iray ity dia "natsangako" niaraka tamin'ny Titaniun ary toa tsy miseho amin'ny sinoa intsony ireo hafatra SU. Ny kisary hafa dia azo averina mivaingana na esorina na ilaina ny manohy miorim-paka?
Valiny tamin'i Siegfried
l andres dia hoy izy:
Heveriko fa efa nisy fotoana ity lahatsoratra ity, saingy tsy maninona izany, anontanio
Manana xperia t2 ultra aho ary nanana JB, saingy nanavao ny Kitkat 4.4.3 aho.
Afaka miorim-paka amin'ity apk ity ve ianao?
Ramatoa azoko ny bokotra volomparasy, misy fampiharana hafa hanonganana ny finday htc
Ary raha manana Android 4.4 🙁 aho
Elias Hernandez dia hoy izy:
Salama, manantena aho fa hamaly ahy haingana ho an'ny maro ianao, niasa tamin'ny mini s3 fa bokotra volomparasy ihany no azoko fa tsy ilay mena, ny android-ko no milaza fa mifanaraka izy io fa misy antony tsy mandeha ary Tsy mbola namaka ny sela mihitsy aho mba tsy hanaiky azy, inona no antony?
Valiny tamin'i Eliana Hernandez
Manrique nerio dia hoy izy:
Salama Francisco Ruiz la Verdad Viejo, nanampy ahy be ny fampianarana nataonao !! Misaotra betsaka fa nanana olana tamin'ny rakitra build.prop aho ary tsy mamela hiorim-paka fa noho ny tutorial anao dia efa vita ny faka ary afaka manitsy ireo rakitra tsy nety aho talohan'ny Misaotra anao anti-panahy tandremo sy tso-drano!
Valiny tamin'i Manrique Nerio
ny kinovan'ny findaiko dia 4.4.2
Mety ilaina ve ny mamaka azy?
Yveth dia hoy izy:
Salama, efa azoko daholo ny dingana rehetra, na ny bokotra volomparasy aza, fa rehefa manandrana mampiasa fampiharana pikantsary aho dia toa tsy miorim-paka izany, inona no azoko atao?
Mamaly an'i Yveth
Edwin lopez dia hoy izy:
Azafady mba azonao atao ny manavao azy ho an'ny alcatel D1 fa hanampy ahy betsaka izy ireo satria tato ho ato dia tsy hitako izay hamaka azy
Valiny tamin'i Edwin Lopez
MossenLluch dia hoy izy:
Raha vantany vao tafapetraka ny SuperSu dia lazainy amiko fa mila manavao ireo bizina aho, saingy maharitra antsasak'adiny. Inona no tokony hataoko?
Mamaly an'i MossenLluch
olona mila valiny dia hoy izy:
Fa maninona no bokotra volomparasy lava no miseho fa tsy ilay mena?
Ny ahy dia Huawei
Android kinova 4.3
Valio olona maika hamaly
Jesus Mendez Ledezma dia hoy izy:
Ny bokotra volomparasy dia satria tsy mifanentana ny fitaovanao….
Valiny tamin'i Jesus Mendez Ledezma
Manana finday sinoa miaraka amin'ny android 4.1 aho ary miasa tanteraka ny fampiharana, lahatsoratra tena tsara.
Jesus Manuel dia hoy izy:
Salama: manana takelaka (zanako vavy aho), izay ilay teny hoe "ANDROID" ihany no miseho. raha avelanao dia toy izany mandra-pahatapitry ny bateria. Inona no mitranga.
Raha misy mamaly ahy dia ho feno fankasitrahana aho
Valiny tamin'i Jesús Manuel
Salama olona, ​​azoko ilay bokotra volomparasy goavambe ary ny findaiko dia SGS3 an'ny jelly bean 4.3 izay tiako holazaina dia ny dikan-teny mifanaraka amin'ny programa ka raha misy aminareo mahalala ny vahaolana na mahita zavatra any, dia ampahafantaro ahy izany pls ny mailaka nataoko taminao dia hijanona eto aho ^^ borjalb98@gmail.com
12085151mlili + dia hoy izy:
Salama, hainao ve ny mamindra ny apps amin'ny sd 32gb nefa tsy mila root? Nanandrana fampiharana an'arivony aho saingy tsy mandeha izy ireo. Ary raha ilaina ny faka aorin'izany, ahoana ny fomba famindrako ny apps amin'ny sd? Misaotra anao
Valio ny 12085151mlili +
azonao atao ny mamaka lg g3 mazava ho azy amin'ity rindranasa ity
abraham zandriny dia hoy izy:
Ao amin'ny s4-ko tsy mandeha aho dia mahazo bokotra volomparasy tokana izay manampy
Mamaly an'i abraham junior
Salama Francisco, tsy mahita robot mety amiko aho amin'ny takelaka fnac 10 🙁
Fantatrao ve misy afaka manampy ahy? Misaotra
Eliet dia hoy izy:
Salama, misy mahalala ve raha ny Cat B15 dia afaka miorim-paka amin'ity fomba ity? Tsy afaka mahazo fampahalalana momba an'ity terminal ity amin'ny Internet aho ary feno rindranasa marobe izay mitaky habaka fotsiny.
Valiny tamin'i Eliet
Day dia hoy izy:
Hifanaraka amin'ny CEL EXPERIA ZL C6502 ahy izany.
Andramo ary lazao anay.
Andao lazaina hoe rehefa nivezivezy tanteraka, .. fa ahoana raha te-hamerina ny findaiko amin'ny maodelin'ny orinasa aho any aoriana, azo atao ve izany? hanohy ny lalana hatrany ve sa hanjavona izany fikirakirana izany
Raha averinao io dia mijanona ny reset; toy ny vaovao, tsy maintsy hamaka intsony ianao.
Salama namana, manana fironana galaxy lite GT S7390L aho, nataoko ihany ny dingana rehetra ary tsy nandeha izy, heveriko fa ny dingana farany dia tsy nivoaka toy ny etsy ambony, ny Android android 4.1.2, ary amin'ny tapitra aho mahazo efijery hafa miaraka amin'ny bokotra volomparasy tokana ary tsy mametraka ny supersu na zavatra mitovy amin'izany, azafady mba ampio ilay fisalasalana, misaotra: P.
Deot dia hoy izy:
Salama Francisco ny fanontaniako dia ity manaraka ity fa manana LG 7X miaraka amin'ny android 4.4..2 ve afaka miorim-paka?
Mamaly an'i DT
juan sebastian gaviria dia hoy izy:
afaka miorim-paka ve ny kintan'ny Samsung galaxi GT-S5282-ko?
Mamaly an'i juan sebastian gaviria
Jesosy c dia hoy izy:
Izy io dia mifanaraka amin'ny motorola moto e miaraka amin'ny kinova Android 4.4.4 Miandry ny valinteninao aho
Mamaly an'i Jesosy c
Johan sebastian dia hoy izy:
Valio i Johan sebastian
Volomparasy mena na volomparasy
Samsun S3, narahiko ny tohatra ary tamin'ny farany dia bokotra volomparasy ihany no hitako fa tsy volomparasy sy mena, dia nojereko sao misy miorim-paka ary tsy mandeha. fanampiana sasany?
Matetika miaraka amin'ny root master aho ary rehefa mivoaka ny litera sinoa dia miseho
jesoa garcia dia hoy izy:
Efa nanandrana in-5 tamin'ny s3 mini nataoko aho ary rehefa vitako ny fisehoan'ny varavarankely iray hafa ary tsy nesorina izy io dia nakatoko ny root root ary niditra tao amin'ny root checker aho ary nilaza tamiko fa tsy miorim-paka
Mamaly an'i Jesosy garcia
Inona no ataoko mba hamongorana ny S Galaxy Young
Setau dia hoy izy:
Salama maraina, takelaka Samsung galaxy tab-2 10.1 faka tsy misy olana. Android 4.2.2 Misaotra betsaka
Mamaly an'i Setau
Ny rohy hampidinana root master dia fandrika hahafaty
Luis Sergio dia hoy izy:
Miasa amin'ny Samsung Galaxy S4 Mini 4.4.2-ko ve izany?
Valio i Luis sergio
Christian perez perera dia hoy izy:
Ao amin'ny root master link scam madio
Mametraka booster an-tariby izy io ary tsy misy orona manala azy.
Misaotra anao lehilahy, misaotra betsaka….
Valiny tamin'i Christian Perez Perera
carlosparrales dia hoy izy:
Ahoana ny fomba famongorana takelaka SuperSonic SC-91JB
Valiny amin'ny carlosparrales
CLOTHING08 dia hoy izy:
Salama, efa nanandrana ny rotmaster aho ary ny valiny dia mitovy amin'ny kingrot, tsy misy dikany izany, efa nosedraiko tamin'ny galaxy s4 tamin'ny android 4.4.2, ary ny huawei miaraka amin'ny mui 3.0, ary tsy mandeha amin'ny iray amin'izy ireo, azafady , alohan'ny hametrahana zavatra, zahao ireo fitaovana mifanaraka aminy, tazomiko ny hevitro fa ny fomba tokana ahafahana mihodina finday dia ny fomba nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny pc, na inona na inona lazain'izy ireo ao amin'ny fanehoan-kevitr'ireo pejy internet sy forum maro karazana. dia tsy afaka namadika finday na oviana na oviana miaraka amina apk voapetraka ao amin'ilay fitaovana, efa hatrany amin'ny alàlan'ny pc izany, ary ilay nahazo zavatra nilaza tamiko ny fomba nanaovany azy sy ny kinovan'ny finday, modely ary android, Manantena vahaolana aho fa tsy nahomby ...
Valiny amin'ny ROPA08
ecaste dia hoy izy:
ny findaiko dia alps s850c ary tsy misy fomba hongotako efa nanandrana ny fomba rehetra misy ary tsy misy --- FANAMPIANA!
Mamaly an'i ecastan
Ahoana ny fomba hanodinana takelaka
Mamaly an'i joseantonio
Maria Eugenia Hernandez dia hoy izy:
Miara-miasa amin'ny alcatel one touch 4033A ahy
Valiny tamin'i Maria Eugenia Hernandez
alan alonso dia hoy izy:
Ho an'ny LTE S3 ve izany?
Mamaly an'i alan alonso
Angel perez dia hoy izy:
mankany amin'ny ROPA08, ao amin'ny takelaka funker s454 sy ao amin'ny takelaka 950 mahery, samnsumg s2, izay tsy azonao na fantatrao dia tsy midika hoe tsy misy ny hafa, tsy manana hevitra momba ny siansa informatika, telefaona aho ary nahavita zavatra maro, izay tsy azonao azonao atao angamba ny tsy fanaovanao tsara azy, etsy ambony no namakiako ny iray izay tsy mahay manavaka ny mena sy ny volomparasy ... safidy ny ophthalmologist.
Manana Samsung S2 miaraka amin'ny Loolypop 5.1.1 aho. Mandeha toy ny tifitra io, ny bateriko dia maharitra eo anelanelan'ny 16 sy 22 ora eo ho eo, manome azy ho tute.
Ary misaotra betsaka an'ireo olona miasa ho an'ny olona kamo toa ahy manararaotra ny asany ireo.
MANKASITRAKA AN'ILAY MASOKO ITY, OLOM-TRANO MAIMAIMPOANA.
Valiny tamin'i Angel Perez
Edison J. Romo R. dia hoy izy:
Tsy mandeha izy, tsy miseho ny efijery farany an'ny Root Master ary misy iray hafa hita ao amin'ny Samsung Galaxy S4 I9500.
Valiny tamin'i Edison J. Romo R.
Salama namana, avelao ny fampiharana apetraka ary mamafa azy io dia manala ny faka, fantatrao ve ny fomba azoko atao hanesorana azy nefa tsy hanaisotra ny faka? Ny zava-mitranga dia toy ny super izy io saingy amin'ny teny sinoa ary tsy haiko raha azo ovaina izy io na raha misy kinova anglisy dia tsara kokoa izany. Ampianaro azafady. Izy io dia niasa ho ahy tamin'ny xperia s fa tsy tiako izany fampiharana izany ary tsy haiko raha misy fomba hamafana azy nefa tsy misy fiatraikany amin'ny faka
Tsy misintona ny fampiharana mampihomehy aho
sakay dia hoy izy:
Misaotra betsaka, fampahalalana tena tsara, afaka namaka haingana ny takelaka AIKUM AT792HC aho.
Valio i chisy
Crisgame: 3 dia hoy izy:
Tsy afaka mamaka ny galaxy samsung galaxy tab 3 (smt210) -n'ny Android 4.4.2.
Inona no fampiharana azoko ampiasaina ???
Azafady mba ilaiko ny mamaky lalao ary raha manampy ahy koa ianao hamaky an'ity lalao ity izay: AVATAR MUSIK dia azonao atao ny misintona azy avy amin'ny fivarotana play ☺.
Azafady, amin'ny findaiko miorim-paka no nampiasako ilay hack fa tsy nisy nety tamiko. .
Ampianaro azafady, azafady, azafady ...?
Valin'ny Crisgame: 3
HELLO NAMANA Te-hanontany anao aho raha afaka miteny amiko hoe ahoana no anaovako izany amin'ny SAMSUNG GALAXI TRED LITE
Agoos Campos dia hoy izy:
Inona no famantarana ny Root Master? Satria maro no miseho amiko
Valiny tamin'i Agoos Campos
Salama Frank, salama alina manantena fotsiny aho fa afaka manampy ahy ianao ... ny vadiko mamaky ahy ny hafatro rehetra sy watsap avy amin'ny fitaovana hafa na pc, ny zava-drehetra dia manondro fa manana faka na zavatra izy ka mijery ahy ny fomba hanesorako an'izany sy izany Tsy azoko intsony ny findaiko azafady ampio aho fa mampiahiahy ity ... misaotra fa salama tsara ianao
san pateste dia hoy izy:
ovay ny findainao dia mihetsika
Mamaly an'i san pateste
1234asd56789 dia hoy izy:
tsy misy tsy ilaina na iray aza amin'ireo fampiharana ireo! (manahirana fotsiny izy ireo)
Valiny amin'ny 1234asd56789
Salama francisco jereo fa manana samsung galaxy grand prime sm-g531f x azafady afaka manampy ahy ianao ahoana no ahafahako mamaka azy x azafady
Maryneku dia hoy izy:
Azoko atao ny misintona fa tsy maintsy apetrako ny findaiko ary tsy tiako ary raha tsy izany dia tsy avelako hisintona !!! Ny ataoko?
Valio amin'i Maryneku
Tsy misy fomba ahafahako mamaka ny Samsung Galaxy Trend 2 Lite..Nanandrana fomba efa ho an'arivony aho ary tsy nisy..raha nisy nilaza tamiko ny handeha hanoroka azy
Lemaka Dayan dia hoy izy:
Amin'ity indray mitoraka ity dia te-hangataka fanampiana aminao aho satria afaka mamaka ny Samsung S7 nefa tsy mampiasa pc ny S7 dia Android 7.0 ary nanandrana faka maro aho fa tsy afaka manampy azafady misaotra mialoha ...
Valiny tamin'i Dayan Llanos
Julio Cesar dia hoy izy:
Manana huawei Y6 II miaraka amin'ny adroid 6.0 aho, efa nanandrana fomba maro koa aho ary nilaza tamiko izy ireo fa tena matanjaka ny mamaka
Alexander coila dia hoy izy:
Salama, ny lg x max tsy atrehiko ary ahoana no fomba anaovako azy?
Valio amin'i Alejandro coila
Ho an'ny p8 lite?
Merge Mon, RPG piozila tsy miasa ao izay tsy maintsy atambatra ireo biby goavanao mba hamoronana matanjaka kokoa
Samurai Kazuya, clicker RPG samurai ary fomba fijery tsara